अस्थीत्वको गोटी | Umesh's Blog
नलेखेको धेरै भएछ । लगभग एक बर्ष भन्दा पनी बढी । समय अभाव हो या शब्दहरुको अभाव हो पत्तै पाउन सकिएन । लेख्नकालागी कुनै शब्द नभेटेर हो या त शब्दहरुको यती धेरै अथाह शमुन्द्र थीयो अनी कती शब्द झीक्ने कती नझीक्ने भन्ने द्विवीदाले गर्दा हो अहीले सम्म केही पनी आँकलन गर्न सकेको छैन । समय कती चाँडो बितीरहेको छ, लाग्छ हरेक पटक परेला झीम्क्याइमा यौटा बर्ष सकीदैछ । सेकेन्ड, मिनेट, घण्टा, दिन, महिना गर्दै वर्ष बितिरहेको छ । हिजो चेतनामा जीवनप्रतीको जुन जीज्ञासा थियो आज पनि त्यही जीवीतै छ । हिजो जीवनलाइ देखेर जुुन आश्चार्यबोध हुन्थ्यो त्यो अझ बढीरहेको छ । जीन्दगीको यौटा अद्भुत् चक्रलाइ देखेर आश्चार्यबोध को प्रकृया उस्तै छ । हिजो र आजमा अनेकौँ पुराना जीन्दगीहरु समाप्त भए भने अनेकौँ नयाँ जीन्दगीहरुको सुुरुवात भयो । कतिका सपनाहरु टुटेर गए भने कतिका जोडीए । कतिले दैवलाइ दोश दिदैँ जीवनको यथार्थलाइ स्विाकार गर्ने हिम्मत गरे भने कतिले उही दैवलाइ धन्यवाद टक्याउँदै जीवनको उही यथार्थलाइ स्विकार गरे । समय न त हिजो फरक थीयो न त आज न त भोलीनै हुन्छ, समय हिजो जस्तै छ । उसै गरी घाउ उदाउँछ, पूर्व, त्यो पर क्षीतीजबाट । अनी उसैगरी अस्ताउँदछ सदाको जस्तै । तर कतिकुुरा हिजोका आज छैनन् भने कती कुरा आजका भोली रहन्नन् । यता हिजो भन्दा नयाँ कती कुरा सुन्न देख्न, भोग्न पाइएको छ भने भोली उसैगरी नयाँ कुराहरु देख्न , सुन्न र भोग्न पाइनेछ । मलाइ यही प्रकृतिको क्षमता देखी आश्चार्यबोध हुन्छ, हरेक पल ।
म जान्न खोज्दछु केही कुरा , तर जब जब म आफुलाइ केही कुरा जाने की भन्ने सोच्नमात्रै थाल्दछु तब तब ममा ज्ञानको कमी भएको महशुस हुन्छ । अथवा भनौँ म कुनै पनी कुरा जान्दीन । जान्नकालागी मैले जानेको कुरा र जान्नबाकीँ कुरा बिचको खाडल कती हो भन्ने कुरा नै मलाइ थाहा छैन । बाहीर हेर्दा यस्तो लाग्छ । कोही मरीरहेका छन् भने कोही बाँचीरहेका, यो झन् अर्को आश्चार्यभाव प्रकट गर्ने विषय हो जस्तो लाग्दछ मलाई ।
कोही किन मर्छ भन्नेकुरा को न त ज्ञान छ मलाइ भने न त कोही किन बाँच्दछ भन्ने कुराको नै । मर्नु र बाँच्नुबीचको ग्यापलाइ मान्छेले जीन्दगी हो भनेर घोषणाँ गरेको छ । मलाइ यो मान्छेले भनिल्याको जीन्दगीको कर्म देखी झन् सातौँ आश्चार्य प्रकट हुन्छ । सायद कुनै पनी मानीसले थाहा पाउँदैन होला, म किन छु, यो धर्तिमा भन्ने रहस्य । न त आफुु हुनुको रहस्य नै थाहा पाउँदछ न त अरु हुनु या नहुनुको रहस्य नै , अथवा भनौँ मानीलाइ त्यो रहस्य थाहा पाउनुको जरुरत नै पर्दैन । विचीत्रको छ यो सबै संसार । आफुलाइ पनी चिन्न नसक्ने बनाएको छ यो प्रकृतिले । मानीस जस्तो चेतनशील प्राणीले त आफुलाइ चिन्न सकिरहेको छैन, भने अरु जीवमा के हालत हुन सक्ला । अनि कहीलेकाहीँ लाग्छ, यो जीवन अस्थीत्वको यौटा खेल जस्तो, उ खेलीरहेछ, सारा जीन्दगीलाइ गोटी बनाएर । लाग्छ क्यारेमबोर्डको स्ट्राइकर बनेर अस्थीत्वले हरेक गोटीलाइ ताकी ताकी खेलीरहेछ जीन्दगीको स्वरुपमा । त्यही बीचमा कोही खुसी भएको अनुभव गर्दछन् भने कोही दुःखी भएको । कोही धनी भएको भान गर्दछन् भने कोही गरीब भएको, अनी कोही ज्ञानको सागरबाट भर्खरै नुहाएर सफा भएर आएझैँ गर्छन् भने कोही अज्ञानको दलदलमा डुबेको कुरा गर्दछन् । न त ज्ञान, न त अज्ञान, न त जीवन न त मृत्यू, न त सुुःख न त दुःख, न त हाँसो न त रोदन, न त धन न त गरीबी । लाग्छ यी सब कुराहरु संयोगमा चलीरहेका छन्, प्रकृतिको यो अनौठो खेलमा । म सदाको झैँ अवाक् हुन्छु । आखीर यो अस्थीत्व कत्रो होला ? अनी कसरी चल्दछ होला मान्छेलाइ खेलाउने यो अस्थीत्व आफुु चैँ ? प्रश्नहरुको तिर तेर्सीन्छ तर उत्तर उही मौन । यस्तो बिराट् अस्थीत्वको सामु यो स्यानु, फुच्चो जीन्दगी देखेर मन मनै हाँस उठ्छ, अनि लाग्छ म पनी यो अस्थीत्वाको खेलको यौटा गोटी भएर दौडीरहेको छु । त्यही बिराट् अस्थीत्वको इसारामा ।